China na akpa akwa na Bikini Emojis, Spain na-achọ nloghachi nke ndị njem nleta na ndị na - eweta ngwaahịa | Mmiri mmiri
Spain mezigharịrị ọnụọgụ ọnwu coronavirus na Mọnde wee gbaa ndị njem nleta si mba ọzọ ka ha lọta na July ka ọ na-ebelata otu mgbochi mkpọchi ike nke Europe, ọ bụ ezie na azụmahịa ndị njem na-enwe obi abụọ banyere ịghachị oge ọkọchị.
Mba nke ugboro abụọ na-eleta mba ụwa mechiri ọnụ ụzọ na ụsọ mmiri ya na Machị iji jikwaa ọrịa COVID-19, wee mesịa gbooro ndị ọbịa mba ofesi izu abụọ. Mana ihe a choro ga-ebuli na July 1, nkwupụta gọọmentị kwuru.
"Onye kasị njọ dị n'azụ anyị," Minista mba ọzọ bụ Arancha Gonzalez Laya tweeted na emojis nke bikini, ugogbe anya maka anwụ na akpa akwa.
“N’ọnwa Julaị, anyị ga-eji nke nta nke nta mepee Spen ndị njem nleta si mba dị iche iche, bulie kwarantaini, hụ na a gbasoro ụkpụrụ nchebe kasịnụ. Anyị na-atụ anya na 2 ga-anabata gị! ”
E webatara na May 15 na obere ịdọ aka ná ntị, iche iche na-akpata ọgba aghara na ụlọ ọrụ ndị njem na esemokwu na France gbara agbata obi. Site na ibuli ya, gọọmentị na-atụ anya ịkwụ ụgwọ maka nkwukọrịta nkwukọrịta n'oge gara aga ma nọ n'ọnọdụ siri ike iji dọta ndị njem nleta si mba ọzọ n'oge ọkọchị a.
Spain na-adọta nde mmadụ 80 kwa afọ, na-eme njem nleta ihe karịrị 12 pasent nke nnukwu anụ ụlọ na ọbụna ọrụ ka ukwuu, yabụ oge ọkọchị dị oke mkpa maka ohere nke mbenata nlọghachi azụ.
Mịnịstrị ahụike ahụ megharịkwara ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ obere site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2,000 ruo 26,834 mgbe ha nyochachara data sitere na mpaghara, wee kwuo na ọ bụ naanị mmadụ 50 nwụrụ site na nje ahụ n'izu gara aga, ọdịda dabara nke izu ndị gara aga. E megharịwo ọnụ ọgụgụ nke ikpe niile na 235,400.
Ogwe ụlọ oriri na ọ andụ inụ na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ wereụ na Madrid na Barcelona kwere ka ha mepee n'èzí na ọkara ikike site na Mọnde, mana ọtụtụ ndị mechiri emechi ka ndị nwe ha tụlere uru nke isi nri ole na ole.
Offọdụ n'ime ndị meghere enweghị nchekwube.
Alfonso Gomez, onye nwe ụlọ oriri na ọ Barcelonaụ restaurantụ na Barcelona kwuru, "Ọ gbagwojuru anya, anyị agaghị enwe ike ịchekwa oge ndị njem, ọ gwụla ma [ndị ọbịa] zuru oke."